Author: Shaktiramar Batilar
Tsindrotsindrony ihany ny fony, Mampalahelo, izany adinon’i Dada a! Ny ana-dray aman-dreny hono hoe toy ny tsipak’omby lahy, ka raha mahavoa mahafaty fa raha tsy mahavoa kosa mahafanina. Hatsiharovana ireo lasa hanembonana ny namana. Vavolombelon’ny mpiasa ny bainga voavadika niryna. Misy mantsy ohabllana olona tsy mba matory izany, Noho ny fitadiavana, ahiahy tebiteby sesilany, Ka ny mazava indray vao misitraka izany torimaso izany.
Ny mihomehy lavo aza misy todiny maika fa ny mitsambiki-mikipy jock. Aza adino ilay hafatra a! Indrisy mantsy ry Alina Dia navelanao hangina izao tontolo izao, Navelanao ho maizina tsy hisy hifamaofao.
O, fitiavana e ia! Manao soa tapany e ia! Fiaraha-miory amin’ireo izay ory, Manala sorisory ireo zava-boribory.
Fananarana tsy andraisan-karama, fa ny fiaraha-monina no ahazoana tsiny aivetinakely. Tantara NY Andriana Education. Izay manenjika ny osa mbola henjehin’ny mahery jock. Ry Alina Indrisy mantsy ry Alina Dia navelanao hangina izao tontolo izao, Navelanao ho maizina tsy hisy hifamaofao.
Mila azy daholo na zovy na zovy. Tsy tafandry mandry irery i Neny, Fahoriana ao amponay ombieny ombieny! O, Soa tapany e ia! O, malagawy ho tsapany e ia! Varimbariana ianao rangahy ity, Adinonao, izahay rehetra aty baba!
Ohabolana – Wikipedia
Ilay Tsiambaratelon’ny Foko Entertainment Website. Raha hizara ihany, fitiavana zaraina ; raha hitondra ody ihany, fitiavana lanjaina ; raha amokatra ihany, fitiavana vokarina ; raha hikendry ny soa, ny fitiavana kendrena jock. Madagascar et son Avenir Magazine. Sections of this page. Ny fitiavan’ny tanora Education Website. Raha mety miverena ianao, Mqlagasy alefanao tsy ampy anay, Fa mila fitiavana e ia!
Andrasana foana izay tianao, na oviana fotoana! Nahita akanga tsara soratra ianao Dada a! Hafaliana nisy taloha avereno zandry Fantatrao, tokantrano tsy sangisangy, Amponay hira ity papa tsy vandivandy! Navadiky ny vady tamim-belirano, anatry ny sisa mbola mitanontanona. Nilaozanao ny ankizy sy i Mama a!
Mivimbi-kahasambarana, ho an’ireo tsy mananana, Fa mitondra tebiteby hoan-dry zareo mpanana. Samy miana-mandeha ka izay miraingiraingy no potraka aloha. O, soa tapany e ia! Aza manao masoandro avy any atsinanana: Fianarana Kabary Malagasy – Fifaneraserana sy fifanakalozana voambolana Education. Ny Kabary Malagasy Local Business. Ohabolana Malagasy shared a post. Mpivady tsy mifandefitra, tsy vitan’ny rava harena, fa mbola mampisotry zaza.
Miverena fa tsy vitan’ny mamangivangy! Lisitry ny ohabolana Hitady ohabolana.
Tsimaintsy milanao daholo ny voary manontolo Raha tsy eo ianao, izao tanisaiko izao ho foana daholo. Mpiasabe vonton’anatra, eny an-tsena avy no manao mbay ilalana jentilisa. Tinao ve ny reninao?
Latsa-dranomaso isan’andro ny aty Malahelo ny fo, ey! Asio tenimamy ho an’i Neny ary e!!!! Oahbolana manao SOA ihany ve, tsy aleo manao soa fo tsy asiana fihatsaram-belan-tsihy na fiangarana? Zanak’omby masiaka tsy matahotra an-dreniny. Ny anatra hono hoe toy ny voankazo an’ala ka ny mamy atelina fa mangidy kosa aloa.